နောက်ဆုံးတော့လည်းတစ်ယောက်တည်းပဲကျန်ခဲ့ရတာပါပဲ ယုံကြည်မိလွန်းခဲ့တာကိုး – Hlataw.com
အခုတလော ကျူပ် လည်း ခရီးတွေ တောက်လျှောက်ထွက်နေရတယ်။ သွားရတာကတော့ အလုပ်ကိစ္စဘဲ ပစ္စည်းတွေပို့လိုက် ယူလိုက်နဲ့ ဆက်တိုက်ကို ခရီးသွားနေရတာ။ ခရီးကလည်းနီးနီးလေးမဟုတ်ဘူး ပြည်နယ်တခုကနေ နောက်ပြည်နယ်တခုကို သွားရမှာဖြစ်လို့ ကားကနှစ်ဆင့်စီးရမှာ။ မနက်ခြေက်နာရီသွား ညနေ ခွန်နှစ်နစ်နာရီ ရောက်အောင်စီးရတာ ဆိုတော့ တနေကုန်ဘဲ။ ကျူပ်လည်း အဝတ်နှစ်စုံ သုံးစုံကို လက်တော့ပ်အိပ်ထဲထည့် ဖုန်းအားသွင်းကြိုးနဲ့ ပါဝါဘန့် လေးထည့်ပြီး မနက်သွားဖို့ အတွက် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ နောက်တရက်မနက် ငါးနာရီခွဲလောက် အိပ်ရာထပြီး ရေမိုးချိုး အဝတ်တွေလဲပြီး မနက်စာစားပြီး စီးကရက်တလိပ်ခဲနေတုန်း လမ်းထိပ်ကနေ သူဌေးရဲ့ကားက ကျူပ်ကို ဂိတ်လိုက်ပို့ပေးဖို့ ဟွန်းတီးပြီးခေါ်တော့ ကျူပ်ရဲ့အိတ်ကိုလွယ်ပြီး သူဌေးရဲ့ကား ရှိရာကိုသွားပြီး သူဌေးရဲ့ကားပေါ်ထိုင်လိုက်တယ်။
မနက်စောစောဆိုရင် တက်စီလည်းမရှိဘူးလေ ဒါကြောင့် သူဌေးကိုယ်တိုင်လာကြိုတာ။ ရာသီဥတုကလည်း အပူပိုင်းမှာမို့လားမသိဘူး မနက်စောစောတောင် အေးရမှန်းမသိဘူး။ ကားကြီးကွင်းနဲ့ ကျူပ်အိမ်ကနေ ကားနဲ့သွားရင် ဆယ်မိနစ်ကျော်ကျော်စီးရတာ တလမ်းလုံး သူဌေးက လက်ချာရိုက်လိုက် သူဌေးမလက်ချာရိုက်လိုက်။ပြန်လာရင် ဟိုဟာဝယ်လာ ဒီဟာဝယ်ဝယ်လာဆိုပြီး တလမ်းလုံးကိုမှာနေတာ။ သူတို့ဘာပြောပြောကျူပ်ကတော့ ဟုတ်ကဲ့သက်သက်ဘဲလေ။ ကိုယ်က သူတို့အလုပ်သမားမဟုတ်လား ။ ကားဂိတ်ကိုရောက်မှဘဲ ကျူပ်လည်း နားမရိမ်းကျင့်ခံရတာ ရပ်တော့တယ်။ ပြောရအုံးမယ် ကျူပ်နေတဲ့မြို့က နယ်စွန်ကမြို့လေးဗျ ဒီမှာ ခရီးသည် လေးငါး ဆယ်ရောက်လောက်ဘဲရှိပြီး နောက်ထပ်တနာရီလောက် ကားစီးပြီးမှ ခရီးသည်တွေ အပြည့်တက်လာမှာ။ ကျူပ်လည်းကားဂိတ်ရောက်တော့ သတ်မှတ်တဲ့ကားပေါ်တက်ပြီး မိမိဝယ်ယူထားတဲ့ ခုံနံပါတ်မှာ ထိုင်ပြီး ကားထွက်မှာကို စောင့်နေတယ်။
ကားက အဲယားကွန်းနှစ်ထပ်ကားကြီး အောက်ထပ်က ပစ္စည်းတွေထားတာ။ ခြောက်နာရီတိတိရောက်တော့ ကားကဒေါင်ကနဲ ထွက်တာ အချိန်က အတိအကျဘဲ ဘယ်သူ့မှမစောင့်ဘူး နိုင်ငံကြီးသားပီသလိုက်တာနော်။ ကားပေါ်မှာ ကျူပ်အပါအဝင် ခရီးသည် ငါးယောက်ဘဲ ရှိပြီး ယောက်ျားလေးကနှစ်ရောက် မိန်းခလေးသုံးယောက်ဘဲရှိတာ ။ တယောက်ထိုင်ခုံ တလုံးစီ သီးသန့်တွေချည်းဘဲ နှစ်ယောက်တွဲထိုင်တော့ ဘေးမှာတခုံစီလွတ်နေကြတာ။ကားကတော့ စပြီးထွက်တယ် စီးရတာလည်း ငြိမ့်ငြိမ့်လေး ဆိုတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတာ။ နယ်စပ်မြို့ဆိုတော့မြို့ပြင်ရောက်တာနဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေ အမြဲရှိတယ်ဗျာ ဂိတ်ရောက်တော့ ရဲတယောက်တက်လာပြီး မှတ်ပုံတင်စစ်ရော ကျူပ်ကိုလည်း စစ်တာပေါ့ ကျူပ်လည်းကိုင်ထားတဲ့ ဧည့်နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ကိုထုတ်ပြတော့ ကျူပ်ကို သေသေချာချာရှာပါရော အိတ်ရောလူပါရှာတာ ပြီးတော့ ကားပေါ်ကနေ ဆင်းခိုင်းတယ်။
ကျူပ်လည်းဘာမှမပြောဘဲ ကားပေါ်ကဆင်းတော့ အနောက်ဖက်ကို ခေါ်သွားတယ် ကျူပ်လည်း စဉ်းစားတယ် ကျူပ်ဘာများမှားသွားသလဲပေါ့ နောက်ထပ်ရဲတယောက်ရောက်လာပြီ ကျူပ်ကို အိမ်သာခေါ်သွားတယ် ပလပ်စတစ်ခွက်လေးတခွက်ပေးပြီး ခွက်ထဲ ဆီးသွားဖို့ ပြောတယ်။ ကျူပ်လည်း ရဲရှေ့မှာဘဲ ခွက်ထဲ ဆီးသွားပြီး ခွက်ကိုရဲအားပေးလိုက်တော့ ရဲက တခါသုံး ဆီးစစ်တဲ့ အတန်ကို ခွက်ထဲနှစ်ထည့်လိုက်ပြီး ဆီးကိုစစ်တယ် ကျူပ်လည်း ရဲကို ဘာလုပ်တာလည်း မသိလို့ရှင်းပြပါဆိုတော့ ရဲက မူးယစ်ဆေးဝါး သုံးစွဲမစွဲ စစ်ဆေးထားပါ မသုံးစွဲရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သုံးစွဲရင်တော့ အရေးယူမှာလို့ရှင်းပြတော့ အခုမှ ကျူပ်လည်းသဘောပေါက်တော့တယ်။ တော်သေးတာပေါ့ ကျူပ်ကဘာမူးယစ်ဆေးဝါးမှ မသုံးဆောင်တော့ ပြသာနာမရှိဘူး ကျူပ်ဆီးကို စစ်တော့ဘာမှ ပြသာနာမရှိလို့ ကျူပ်ကို ကားပေါ်ပြန်တက်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ကျူပ်လည်းတက်ရော ကားကဆက်ပြီး ခရီးဆက်တယ် မြို့ကြီးဝင်ခါနီး နောက်ထပ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်တခုကိုရောက်တော့ ကားကနောက်တခါထပ်ရပ်ပြီး အစစ်ဆေး ခံရတယ်။ ရဲတယောက်ထပ်တက်လာပြီး မှတ်ပုံတင်စစ်ဆေးတယ်။ ကျူပ်တယောက်ဘဲ ဧည့်နိုင်ငံသားပါတော့ ကျူပ်ကို တခြားခရိုင်သွားဖို့ ခွင့်တောင်းသည့် စာရွှက်ပါလားလို့မေးတော့ ကျူပ်လည်း စာရွှက်ထုတ်ပြတော့ ရဲလည်း သေချာ စစ်ဆေးပြီး ကျူပ်ကိုပြန်ပေးပြီး ကားပေါ်ကနေ ပြန်ဆင်းသွားတယ်။ ဒီကနေအရှေ့မှာ ဘာစစ်ဆေးရေးဂိတ်မှမရှိတော့ဘူး။ မြို့ကြီးကိုရောက်တော့ ကားကွင်းမှာ နာရီဝက်နားမယ်လို့ ကားစပါယ်ယာ အမျိုးသမီးက ကြော်ငြာတော့ ကျူပ်လည်း ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်တယ်။ ဒီမှာက မြို့တွင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် ခရီးဝေးဘဲဖြစ်ဖြစ် စပါယ်ယာကတော့ မိန်းခလေးတွေဘဲသုံးတာ ။နောက်ပြီးဒီနိုင်ငံက အရက်သောက်တာထက် ဆေးလိပ်သောက်တာ တော်တော်လေး မုန်းတာ။
ဒီတော့ကျူပ်လည်း ခပ်ဝေးဝေးမှာ လူသူကင်းတဲ့ ချောင်တနေနေရာမှာ ဆေးလိပ်သွားသောက်ရတာပေါ့။ ဇတ်လမ်းက ဆေးလိပ်က စတာဘဲ။ ဆေးလိပ်သောက်တာက မြို့တွင်းသွားတဲ့ ကားဂိတ်ရဲ့နောက်မှာ အဲ့ဒီကနေကြည့်ရင်ကျူပ်စီးတဲ့ကားကို လှမ်းမြင်ရတယ်။ ဆေးလိပ်တလိပ် မီညှိပြီး ကားဖက်မျက်နှာမူကာ သောက်နေတယ်။ ဘေးမှာလည်း လူတယောက် ကျူပ်လိုဆေးလိပ်ထိုင်ပြီး သောက်နေတယ်။ ခဏနေတော့ ငတိုးမလေး တယောက် ဒီဖက်ကိုလျှောက်လာတယ်။ သူလည်းဆေးလိပ်သောက်ဖို့လာတယ်လို့ ထင်နေတုန်း ကျူပ်ဘေးက လူနားလာပြီး ဆေးလိပ်တလိပ်ကို လက်ဟန်ခြေဟတ်နဲ့ တောင်းတော့ ဟိုလူက သူသောက်နေတဲ့ ဆေးလိပ်ကို ထိုးပေးတော့ ငတိုးမလေးက မယူဘူး။ ကျူပ်လည်း စီးကရက်ဗူး ထောင်ပြလိုက်တော့ ကျူပ်ဆီလာပြီး စီးကရက်တလိပ်ထုတ်ယူပြီး ကျူပ်ကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကာ သူစီးမယ့်ကားဖက် ထွက်သွားလိုက်တယ်။
ကျူပ်လည်း အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဘဲ …ကိုသွားပြီး ပီကေသွားဝယ်လိုက်တယ် ။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဘေးမှာကျနေတဲ့သူက ဆေးလိပ်မသောက်တဲ့သူဖြစ်နေရင် အားနာလို့ ။ ကျူပ်လည်း ဆေးလိပ်တလိပ်လောက်သောက်လိုက်ရတော့ အာသာပြေသွားတယ်။ ကျူပ်လည်းကားပေါ်တက်လိုက်တော့ နောက်ဖက်နားမှာ ငတိုးမလေးကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ သူလည်းအံ့အားသင့်ပြီး ပြုံးပြတယ်။ ကျူပ်လည်းပြန်ပြုံးပြပြီး ကိုယ့်နေရာမှာ ထိုင်လိုက်တယ်။ ကားသွားတော့ ကျူပ်ဘေးမှာ ယောက်ျားလေးတယောက်ထိုင်တယ်။ ကားကတော့သူ့  ခရီးစဉ်အတိုင်း ရှေ့ဆက်သွားတော့ တယ်။ နောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်သွားပြီး မြို့ငယ်လေး တမြို့ရောက်တော့ ဆယ့်ငါးမိနစ်နားမယ် လို့ စပါယ်ရာမလေးကအော်တော့ ကားရပ်တာနဲ့ အပေါ့သွားပြီး ထွက်လာတော့ ဒေါင့်တနေရာသွားပြီး ဆေးလိပ်တလိပ်ထုတ်သောက်တော့တာဘဲ။ ကျူပ်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ ရှေ့ပလက်ဖေါင်းမှာ ငတိုးမလေးထိုင်တယ်။
သူလည်းဆေးလိပ်ငတ်နေသလိုဘဲမို့ ကျူပ်ကဆေးလိပ်သွားပေးတော့ချက်ချင်းဘဲယူလိုက်ကာ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတယ်။သူ့ကိုအခုမှ သေချာကြည့်မိတော့ ကျူပ်ထက်ငယ်တယ်။ ငတိုးဆိုမှတော့ အားကနီစပ်စပ် မှဲ့ခြောက်တွေ အနည်းငယ်ပေါက်နေပြီး င်္အကျီက ရင်ဘတ်ဟောင်းလောင်းကြီးမြင်နေရတဲ့ စွပ်ကြယ်တထည်ဝတ်ထားပြီး အတွင်းက နို့နှစ်လုံးကို ပြူးနေအောင်မြင်ရတယ်။ သူ့ရဲ့နို့တွေကသေးသေးလေး အပေါ်ကနေကြည့်ရင် နို့သီးခေါင်းတောင်မြင်ရတဲ့ အဖြစ် ကျူပ်လည်း ခဏလောက်စိုက်ကြည့်ပြီး ကားပေါ်တက်လိုက်တယ်။ ငတိုးမလည်း ဆေးလိပ်တဝက်လောက်သာဖွာရပြီး ကားပေါ်ကမန်းကတန်းတက်လာတယ်။ စပါယ်ယာမလေးက ကားထွက်တော့မယ်လို့အော်နေပြီလေ။ ဒီလိုနဲ့ကားကနောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်သွားတော့ ခရိုင်မြို့ကိုရောက်လာတယ်။ ကျူပ်ကဖုန်းကနာရီကိုကြည့်တော့ တဆယ့်တနာရီဘဲရှိသေးတော့ နောက်ထပ်နာရီဝက် လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ရမှာသိနေတော့။
ကားပေါ်ကနေ နောက်ဆုံးမှဆင်းတယ်။ ငတိုးမလေးဆင်းသွားတာကြည့်ရင်း စိတ်ထဲက တွေးလိုက်တယ် လူကသေးသေးလေး တင်တွေပေါင်တွေက အကြီးကြီး ဖင်ထောင်ပြီးဆွဲလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ဆိုတာတွေးရင်းကြည့်နေမိတယ်။ကျူပ်လည်းရောက်တဲ့နေရာမှာ ဘယ်နေရာက ဆေးလိပ်သောက်လို့ရတယ်ဆိုတာ သိထားတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒီခရီးကို အကြိမ်ကြိမ်လာဘူးလို့ဘဲ။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘဲ ဆေးလိပ်သောက်ရင်း ကားစတေရှင်ဖက်ကြည့်မိတော့ ငတိုးမလေး အိတ်နှစ်လုံးလွယ်ရင်း ဟိုဟိုဒီဒီလျှောက်သွားနေတာကို လိုက်ကြည့်နေမိတယ်။ ကျူပ်လည်းဆေးလိပ်သောက်ပြီးတော့ စီးရမယ့်ကားရပ်မယ့်နေရာဆီကို သွားလိုက်တယ်။ ကးလာရောက်ရပ်မယ့်နေရာရဲ့ ဘေးမှာ စားသောက်ဆိုင်ရှိတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ ငတိုးမလေးထိုင်နေတယ်။ သူက စားစရာမှာမလိုလုပ်တုန်း ကားတစီး ဝင်လာတော့ ကမန်းကတန်းထပြီး ကားနားကို အိတ်နှစ်လုံးမပြီးလာတယ်။
ဘေးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကို အကူအညီတောင်းတဲ့အနေနဲ့ မေးတော့ သူဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေက လက်ခါပြတယ်။ သဘောက နားမလည်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ ဒါကျတော့ ကျူပ်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေက သာပြန်ရော အနည်းနဲ့အများရွှီးတတ်တယ်။ ဒီတော့ကျူပ်လည်း မနေနိုင်တော့ဘဲ သူ့ဆီသွားပြီးမေးလိုက်တယ်။ သူမက သူမသွားမယ့်မြို့ကိုပြောတော့ ကျူပ်သွားမယ့်မြို့နဲ့ တမြို့တည်းဘဲဖြစ်နေတယ်။သူမနားက လက်မှတ်တောင်းကြည့်တော့ ကျူပ်နဲ့တချိန်တည်း တကားတည်းဘဲဖြစ်နေတယ် ။ နောက်ပြီးထိုင်ခုံနံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့လည်း ကျူပ်ဘေးမှာ ကပ်ရက်ဘဲ ထိုင်ရမှာ ဆိုတော့ သူမလည်း တော်တော်လေး ဝမ်းသာသွားတယ်။ ကျူပ်တို့စီးမယ့်ကားက နောက်နာရီဝက်မှလာမှာ အေးအေးဆေးဆေး အနားယူလို့ရတယ်လို့ ပြောလိုက်တော့သူမလည်း အခုမှ စိတ်အေးသွားပြီး သူမပစ္စည်းတွေကို ချပြီး ကျူပ်ရဲ့ဘေးနားမှာလာထိုင်တယ်။
သူမကို နေ့လည်စာမစားတော့ဘူးလားမေးတော့ ဘာမှစားချင်စိတ်မရှိဘူးတဲ့။ ကျူပ်က ဆယ်တန်းနဲ့ကျောင်းပြီးတာဆိုတော့ နဲနဲပါးပါးဘဲ ဘိုလိုမှုတ်တတ်တာ လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ဘဲ ပြောတာများတယ်။ သူမကိုဆေးလိပ်သောက်မလားမေးတော့ ဆေးလိပ်လည်းသောက်ချင်ကြောင်း အိမ်သာလည်း သွားချင်ကြောင်းပြောတော့ အိမ်သာသွားရမဟ့်နေရာကို ပြပေးတော့ သူမလည်း ဟန်မဆောင်နိုင်ဘဲ အိမ်သာဖက်ကိုသွားလိုက်တယ်။ တအောင့်နေပြီးသူမပြန်လာတော့ မလှမ်းမကမ်းနားသွားပြီး ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ဗူးကိုကမ်းပေးလိုက်တော့ ဆေးလိပ်တလိပ်ထုတ်ပြီး ကျူပ်ကိုအရင်ကမ်းတယ်။ပြီးမှတလိပ်ထုတ်ပြီးသူမယူတယ် မီးခြစ်ပေးလိုက်တော့ ကျူပ်ကိုအရင်ပေးညှိပြီး သူမကနောက်မှညှိတယ်။ နိုင်ငံကြီးသားပီသလိုက်တာဗျာ သူတို့ရဲ့ အပြုအမူတွေက တော်တော်လေး ယဉ်ကျေးတဲ့သူတွေဘဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။ သူကိုဘယ်နိုင်ငံကလည်းမေးတော့ ဆွတ်ဇလန်ကတဲ့။
ကျူပ်ကိုလည်းမေးတော့ မြန်မာနိုင်ငံကလို့ ပြောတော့ သူမအိတ်ထဲက စာအုပ်တအုပ်ထုတ်ပြီး ကျူပ်ကိုပြတော့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ခရီးသွားလမ်းညွှန်စာအုပ်ကြီး မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံကိုပြပြီး ဘယ်မှာနေတာလည်းလို့မေးတော့ ကျူပ်နေတဲ့နေရာကို လက်ထောက်ပြလိုက်တယ်။ ပြီးမှသူမှကရှင်းပြတယ် သူမက အရှေ့တောင်အာရှထဲ လေ့လာရေးထွက်လာတာဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလည်းသွားမည် ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြတော့တာဘဲ။ ပြီးတော့ကျူပ်နာမည်ကိုမေးတော့ ငြိမ်းချမ်းလို့ပြောလိုက်တော့ သူမနာမည်မှာ ကစ်တီဆိုတာပြောရင်း ငြိမ်းချမ်းဆိုတာ ဘာအဓိပ္ပါယ်လည်းမေးတော့ …. လို့အဓိပ္ပါယ်ရကြောင်းပြောတော့ သူမလည်း ဒီနာမည်ကို သဘောကျကြောင်းပြောတယ်။သူမအသက်ဘယ်လောက်လည်းမေးတော့ ၃၂နှစ်တဲ့ အိမ်ထောင်လည်းမကျသေးဘူးလို့ပြောပြီး ကျူပ်ကိုမေးတော့ ၄၅ရှိပြီးအိမ်ထောင်ရှိတယ် ခလေးတယောက်နဲ့လို့ပြောလိုက်တော့ သူမက ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကျူပ်နဲ့ကစ်တီက သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားပါလေရောဗျာ။ ကျူပ်ငယ်ငယ်တုန်းက အာရပ်စကားပုံ တခုဖတ်ဘူးတယ်။ အာဖရိက က ကျီးကန်းကြီးက နတ်သမီးကိုသုတ်သွားသတဲ့ ။ အခုလည်း ကျူပ်ကမည်းမည်းကြီး ကစ်တီက ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ရေဆင်းငါးကြီး ခွီးခွီးခွီး ကျူပ်တို့နှစ်ယောက် ကားပေါ်မှာ ဘေးချင်းယှဉ်ပြီးထိုင်ကာ စကားတွေ ဖေါင်ဖွဲ့ပြောချင်တာ သူ့စကားကိုယ်မသိ သူ့စကားကိုယ်မသိ ဖြစ်နေတော့ ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိဘူး။ ကစ်တီတော့ မသိဘူး ကျူပ်တော့ ရင်တွေခုန်နေတယ်ဗျာ။ ဟိုသီချင်းလိုပေါ့ ရင်ခုန်ရလွန်းလို့ရူးမှာဘဲ ဆိုသလိုဖြစ်နေလေရဲ့။ ကစ်တီလည်း စကားပြောဖော်မရှိတော့ ကားပေါ်ကပေးတဲ့ရေတွေသောက်လိုက် မုန့်တွေစားလိုက်နဲ့ အိမ်သာခဏခဏသွားလိုက်လုပ်နေတယ်။ စိတ်ထဲကတောင်တွေးနေမိတယ် ဒီလောက်တောင် သေးပေါက်မှတော့ သူ့အဖုတ်များ နမ်းရင် သေးစော်ဟောင်နေမှာဘဲလို့ ။
ကျူပ်ကတော့ ကားပေါ်ကအိမ်သာမသွားဘူး ဆီးကို အောင့်နိုင်သလောက်ရအောင်ကို အောင့်ထားတာ။ ကားပေါ်ကအိမ်သာအခန်းက တအားပူတာ အိမ်သာမှာ ကာထားတဲ့ တံခါးပေါက်ဘောင်တွေက အစပူနေတာ ရေတွေလည်းပူ ဆိုတော့ သွားချင်စိတ်ကိုမရှိတာ။ ကားက နောက်ထပ်ခြောက်နာရီကျော်ကျော် စီးရမှာဆိုတော့ လူတွေအားလုံးလည်း ငိုက်လာကြတယ်။ ကျူပ်လည်းငိုက်လာပြီး ခုံကိုနောက်ဖက်ကိုချပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ ကစ်တီလည်း ကျူပ်လိုဘဲ ခုံကိုနောက်ဖက်ချပြီးအိပ်တယ်။ ကျူပ်ကဖြင့် အိပ်တောင်မပျော်သေးဘူး ကစ်တီခေါင်းက ကျူပ်ပခုံးပေါ်ကျလာတယ်။ ကျူပ်လည်း လက်ကိုမလိုက်ပြီး ကစ်တီကို ကျူပ်ရင်ခွင်ထဲကို ဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ ကစ်တီလည်း ဘာမှမပြောတော့ လက်ကို ကစ်တီ ပခုံးကို ဖက်လိုက်တာပေါ့။ ကျူပ်လည်းခေါင်းကို ကစ်တီခေါင်းပေါ်တင်ပြီး အိပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုအိပ်ပျော်မှာလဲ မိန်းခလေးတယောက် ရင်ခွင်ထဲမှာ ရှိနေမှတော့။
ဒီအချိန်မှာ အိပ်ရင် လအ ဖြစ်သွားမှာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား? ဒီတော့ကျန်တဲ့ လက်တဖက်က ကစ်တီရဲ့ဘိုက်ပေါ် တင်လိုက်တယ်။မီးကစိမ်းတုန်းဘဲ လမ်းကြောင်းရှင်းတယ် ဘာမှအကြောင်းမပြန်ဘူး သဘောက ဆက်မောင်းလို့ရတဲ့သဘောဘဲ။ ကစ်တီလည်း အားကျမခံ သူမရဲ့ လက်က ကျူပ်ရင်ဘတ်ပေါ်ရောက်လာတယ်။ ဘေးလူတွေအမြင်မှာ တော်တော်လေး ချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူတွေလို့တောင်ထင်စရာ ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကစ်တီရဲ့လက်က ရင်ဘတ်မှာလာကစားတယ်။ ကျူပ်ရဲ့လက်ကလည်း ကစ်တီရဲ့ ဗိုက်ပေါ်ပြေးလွှားဆော့ကသားနေတယ်။ နှစ်ယောက်သား အဆင်ကိုပြေလို့။ လန်းတန်းတာကတော့ ရှယ်ဘဲ။ အောက်ကကောင်ကလည်း ပျောက်ကျားဘောင်းဘီအပွထဲမှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဖြစ်လာတယ်။ လွယ်လိုက်တာနော် ငတိုးတွေက သူတို့သဘောကျတဲ့သူဆို ချက်ချင်းကိုချကျွေးတာ ကြားဘူးတယ်ဆိုတာ တကယ်မှန်းသိလိုက်ရတယ်။
ကစ်တီနဲ့ကျူပ် ရင်းနှီးတာနာရီပိုင်းဘဲရှိသေးတယ် ဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ပြီလေ။ ရွှေရောင်ဆံပင်တွေက ကျူပ်မျက်နှာနား လာပြီးကလူနေတော့ ကျူပ်လည်း နမ်းလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဂျိုစောင်းလေးကနီးတော့ ဂျိုစောင်းလေးပါနမ်းလိုက်တယ်။ ကစ်တီလည်း ကျူပ်ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကို ပြန်လည်ပွေ့ဖက်လာတယ်။ကျူပ်ဖြင့် ကြည်နူးလိုက်တာ စိတ်ထဲမှာ တခါတည်း ပျော်ရွှင်မှုတွေ အလုံးလိုက်ဝင်လာသလိုတောင် ခံစားရတယ်။ ကစ်တီမျက်နှာမော့ပြီး ကျူပ်ကိုကြည့်တော့ သူမနဖူးကို ဖျက်ကနဲနမ်းလိုက်တယ်။ ကစ်တီက ကျူပ်ကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်တယ်။ ကျူပ်လည်း စိတ်ကို မနဲထိန်းထားရတယ် ဖူးပြီးကြွနေတဲ့ နုတ်ခမ်းတစုံကို နမ်းချင်တာများ စိတ်ထဲမှာကို ယားနေတာမပြောပါနဲ့တော့ ကားပေါ်မှာမလို့စိတ်ကို တော်တော်ထိန်းရတာ။ ကစ်တီလည်း တော်တော်ပျော်သွားတဲ့ပုံဘဲ ကျူပ်ကိုကြည့်ပြီး ကျူပ်ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းပြန်တိုးဝင်လာတယ်။ ကျူပ်လည်း သူမကို ဖက်ပြီး ဖိးယူနေလိုက်တယ်။
ကစ်တီနဲ့ကျူပ် ကားရပ်တဲ့နေရာရောက်ပြီဆိုရင် နှစ်ယောက်သားအပြိုင် ဆေးလိပ်တွေဖွာလိုက် မုန့်တွေဝယ်စားလိုက်နဲ့ ပွဲဖြစ်နေတယ်။ ညနေစောင်းတော့ ကျူပ်တို့သွားမယ့်မြို့ကိုဝင်တော့တယ်။ ကျူပ်က တကယ်တန်း မြို့ပြင်မှာဆင်းပြီးရင် ကျူပ်အလုပ်ရှိတဲ့ နေရာနဲ့ဆိုရင်နီးနီးလေး ဒါပေမယ့် ကစ်တီပါတာကြောင့် ကျူပ်လည်း ကားဂိတ်အဆုံးထိ လိုက်ခဲ့တယ်။ တော်ကြာနေ သူမတယောက်တည်း လမ်းပျောက်မှာကြောက်လို့။ဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေ ဆင်းတာနဲ့ မြို့ထဲကို သွားမယ့် လိုင်းကားပေါ် နှစ်ယောက်သား တက်လိုက်တယ်။ ကျုပ်ကတော့အိတ်တလုံးထဲ လွယ်လိုက်ရင်ပြီးပေမယ့် ကစ်တီကတော့ အိတ်နှစ်လုံးဖြစ်နေလို့ သူ့အိတ်တလုံးကို ကူပြီးသယ်ပေးလိုက်တယ် ။ မြို့ထဲသွားမယ့် လိုင်းကားပေါ်ရောက်တော့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လိုက်တယ်၊၊ ကစ်တီက သူသယ်လာတဲ့ အိတ်ကို ပေါင်ကြားထဲ ဇွတ်အတင်း ထိုးထည့်တော့ သူ့အနေနဲ့ ပေါင်နှစ်လုံးကို ကားပြီး ထိုးထည့်တယ်။
နဂိုကမှ ပေါင်လောက်ရှိတဲ့စကဒ်ဆိုတော့ ပေါင်လည်းဖြဲရော အတွင်း ဘောင်းဘီတိုလေးက ပေါ်လာပါလေရော။ ကျုပ်ကလည်း ပေါ်လာတဲ့ အခိုက်အတန့်လေး မလွှတ်တမ်း ကြည့်လိုက်တယ်။ ဘောင်းဘီတို အဖြူလေးတောင် ညိုညစ်ညစ် ဖြစ်နေတယ်၊ ကစ်တီလည်း ကျုပ်ဘာကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သိသွားပြီး ပေါင်နှစ်လုံးကို စိလိုက်တယ်၊၊ ကျုပ်လည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲ မချိပြုံးပြုံးပြလိုက်တယ်၊၊ုမြို့လယ်ရောက်တော့ ကျုပ်နဲ့ကစ်တီလည်း ဆင်းလိုက်ကြပြီး နီးစပ်ရာ တည်းခိုခန်းမှာဘဲ တည်းလိုက်ကြတယ်၊၊ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ပစ္စည်းတွေချပြီး နှစ်ယောက်သား အငမ်းမရ နမ်းတော့တာဘဲ။သူလည်းတော်တော်လေး ပြတ်နေပုံရတယ် ကျုပ်ကိုနမ်းနေတာများ အားရပါးရကိုနမ်းတာ။ ကျုပ်လည်းပါးစပ်ကသာနမ်းတာ လက်က သူ့အဝတ်တွေကို ချွတ်နေတာပေါ့။ သူလည်းနမ်းရင်းကျုပ်ရဲ့အဝတ်တွေကို ချွတ်နေလေရဲ့။ သူပါးစပ်ထဲ ကျုပ်လျှာထိုးထည့်တော့ သူကစုတ်လိုက်။
ကျုပ်ပါးစပ်ထဲ သူ့လျှာထိုးထည့်တော့ ကျုပ်ကစုတ်တော့တာပေါ့။ ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံး တော်တော်လေး ထန်နေကြတာ မပြောပါနဲ့တော့။ အဝတ်တွေ ကျွတ်သွားတာနဲ့ သူပေါင်နှစ်လုံးကြားထဲ ဝင်ပြီး ကျုပ်ရဲ့ဒုတ်ကို အတင်းကာရော ထိုးထည့်တော့တာဘဲ။ ဟိုထိုးဒီထိုးနဲ့ နောက်ဆုံးတော့ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်တော့တာဘဲ။ ကျုပ်လည်း အပေါ်ကနေတက်ပြီး တဖုန်းဖုန်းနဲ့ လှော်တော့တာဘဲ။ သူလည်း အောက်ကနေ ပင့်တင်ပေး ကျုပ်လည်း အပေါ်ကနေ အသားကုန်လှော်နဲ့ သိပ်တောင်မကြာလိုက်ဘူး တချီပြီးသွားတယ်။ ကျုပ်အရေတွေ အားလုံး သူ့ အဖုတ်ထဲမှာ အပြည့်ဘဲ၊၊ ကျုပ်ဟာလည်း သူ့ထဲမှာဘဲ တွင်းစိမ်ရင်း တယောက်ကို တယောက်ဖက်ပြီး နှပ်နေလိုက်တယ်။ နှစ်ယောက်သား ဖက်ပြီး တော်တော်ကြာကြာလေး နားလိုက်တာ ဆိုပေမယ့်။တယောက်ကိုတယောက် ပွတ်သတ်ကျီဆယ်နေကြတယ်။ စိတ်အတွင်းက ဆာလောင်မှုတွေ ခဏတာအတွက် အဆာပြေပေမယ့်။
နှစ်ယောက်စလုံး ရင်ထဲမှာ နောက်ထပ်ပွဲတွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မပြောပေမယ့် သိနေကြတယ်။ ခဏနေတော့ ကစ်တီက အိပ်ယာကထပြီး ရေချိုးခန်းသွားတော့ ကျုပ်ကိုလည်း လက်ကမ်းပေးပြီး သူနဲ့အတူ ရေချိုးခန်းထဲ အတူလိုက်ဖို့ခေါ်တော့ ကျုပ်လည်း ကစ်တီနဲ့အတူ ရေချိုးခန်းထဲ လိုက်သွားလိုက်တယ်။ ကစ်တီက အိမ်သာထိုင်ခုံပေါ်မှာထိုင်ပြီး ကျုပ်ဖက်လှည့်ပြီးသေးပေါက်တော့ ကျုပ်ရဲ့ လီးလည်း ချက်ချင်းဘဲ တောင်လာပါလေရော။ အခုမှဘဲ မိန်းခလေး သေးပေါက်တာကို သေသေချာချာမြင်ဘူးတော့တယ်။ ကျုပ်လည်း လီးကိုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း ကစ်တီရှေ့မှာထိုင်ပြီး နို့တွေကိုစို့တော့တာဘဲ။ နို့တွေက မကြီးမသေး နဲနဲလောက်တွဲနေပြီး နို့သီးခေါင်းတွေကတော့ ပန်းရောင်သန်းနေဆဲ။ တဖက်ကိုစုတ် တဖက်ကို လက်တဖက်နဲ့မွှေတော့တာပေါ့။ ကစ်တီလည်းဖီးလ်တွေ လာတယ်ထင်ပါရဲ့။ ကစ်တီလည်း သူ့အဖုတ်ကိုရေဆေးပြီး အပေါ်ကိုကော့တက်ပေးလာတဲ့ တင်ပါးကြောင့် သူ့ရဲ့ အဖုတ်က။
ကျုပ်ရင်ဘတ်နားမှာ ကပ်လာပါလေရော။ ကျုပ်လည်း နို့စို့ရင်း တဖြည်းဖြည်းချင်း နမ်းရင်း အောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ အသားအတွင်းထဲဝင်နေတဲ့ ချက်ကို ငုံပြီးစုတ်တော့ ကစ်တီလက်တွေက ကျုပ်ခေါင်းကို အတင်းဘဲ သူ့အဖုတ်ရှိရာ တွန်းချတော့တာဘဲ။ ဖြူဖွေးပြောင်လက်ပြီး ရေတွေစိုနေတဲ့ အဖုတ်ကို ကျုပ်လည်းနမ်းရင်း လျှာဖျားလေးနဲ့ အတွင်းကိုထိုးတော့ ကစ်တီနုတ်ဖျားက တရှူးရှူးနဲ့ ဖြစ်လာပြီး ကျုပ်ခေါင်းကိုကိုင်ကာ သူအဖုတ်နဲ့ဖိပြီး ကျုပ်မျက်နှာနဲ့ ဖိပြီးကပ်လိုက် ပွတ်လိုက်လုပ်တော့တယ်။ ကျုပ်လည်းမနဲ အသက်ရှူရပြီး သူ့စိတ်တိုင်းကျ လိုက်လျှောကာ အသာဘဲ သူခေါ်ရာနောက်လိုက်တာပေါ့။ ကစ်တီလည်းသိပ်မကြာပါဘူး ကျုပ်လျှာအစွမ်းကြောင့် တချီပြီးသွားပါလေရော။ သူပြီးသွားပေမယ့် ကျုပ်ကတော့ ဆက်ပြီးမှုတ်ပေးနေတယ်။ သူ့အရည်တွေ ကျုပ်မျက်နှာ တခုလုံးပေပွနေတယ်။ ခဏကြာတော့ ကျုပ်ကိုဆွဲထူပြီး ကျုပ်မျက်နှာမှာပေနေတဲ့ သူ့အရည်တွေကို လျှက်ကာ တျုပ်မျက်နှာ အနှံ့နမ်းတော့တာဘဲ။
ကစ်တီက မျက်နှာတွေ နမ်းရင်း ကျုပ်နူတ်ခမ်းတွေကိုစုတ်လိုက် လျှာဖျားလေးနဲ့ထိုးလိုက် လျှာတချောင်းလုံး ကျုပ်ပါးစပ်ထဲထိုးထည့်လိုက်။ကျုပ်က သူ့လျှာကိုစုတ်တော့ ဖျက်ခနဲ နောက်ဆုတ်လိုက် လုပ်တော့ ကျုပ်ရင်တခုလုံး ဗြောင်းဆန်မတတ်ဖြစ်လာတယ်။ သူ့ရဲ့လက်တွေကလည်း အငြိမ်မနေဘဲ ကျုပ်ရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေကို ညှစ်နေတော့ ကျုပ်မှာက တော်တော်လေး ထန်လာတယ်။ ဒါတင်ဘဲလားဆိုတော့ မဟုတ်ဘူး ဆက်ပြီး ကျုပ်ရဲ့နို့သီးခေါင်းတွေကို နမ်းလိုက် စုတ်လိုက် သွားတွေနဲ့ကိုက်လိုက်လုပ်တော့ အူတွေထွက်မတတ် ခံစားလိုက်ရတယ်။ ခဏကြာတော့ အောက်ဖက်ကိုဆင်းလာပြီး ကျုပ်ရဲ့လီးကို နမ်းလိုက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ရစ်ပတ်လိုက် ကွမ်းသီးလုံးလေးကိုဘဲစုတ်လိုက် လျှာဖျားလေးနဲ့ ဒစ်ကြားထဲ ထိုးလိုက် ကွမ်းသီးထိပ်ရှိ အပေါက်ထဲထိုးလိုက်လုပ်တော့ ကျုပ်တကိုယ်လုံးမြောက်တက်လာပြီး ခြေဖျားတွေတောင် ထောက်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာတယ်။
ကြာတော့တကိုယ်လုံး လေထဲမှာ ကိုင်မြှောက်ထားသလိုဘဲ ခံစားရတယ်။ ပြီးတော့လတန်တချောင်းလုံးကို ချိုချဉ်စုတ်သလို တပြွတ်ပြွတ်နဲ့ စုတ်တော့တာဘဲ။ လက်ကလည်း လအုတွေကို ကစားနေသေးတယ် ကျုပ်လည်း တဟင်းဟင်း တအင်းအင်းနဲ့ အဖျားတက်သလို အော်နေတော့တာဘဲဗျာ။လတန်တချောင်းလုံး အာခေါင်ထိအောင်အဆုံးထိ ထိုးထည့်နေတော့ ကျုပ်လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ကစ်တီခေါင်းကိုကိုင်ပြီး သူ့ပါးစပ်ကို လိုးတော့တယ်။ ကစ်တီကလည်း ကျုပ်ဆောင့်ချက်တွေကို မညီးမညူဘဲ တအွတ်အွတ်နဲ့ အသံတွေထွက်အောင်ကို ခံတော့တာဘဲ။ ကျုပ်လည်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပါးစပ်ကို လိုးဖူးတာဆိုတော့ အတွေ့အကြုံသစ် တမျိုးပေါ့။ ကောင်းလိုက်တာဗျာတကယ် ကစ်တီပါးစပ်ထဲကနေ အာရည်တွေစီးကျလာပြီး မျက်ရည်တွေလည်း စီးကျလာတော့ ကိုင်ထားတဲ့ သူ့ရဲ့ခေါင်းကို လွှတ်ပေးလိုက်တော့ ကစ်တီလည်း ကျုပ်လတန်က ပါးစပ်က ထုတ်ပြီး အသက်ကိုမနဲရှူနေရတယ်။
ခဏနေတော့ ထိပ်းဖျားလေးကိုငုံပြီး သူ့လက်နဲ့ ထုတော့ သိပ်မကြာခင် ကျုပ်လည်း ပြီးဆုံးသို့ရောက်လာတယ်။ ကျုပ်လည်းထွက်တော့မယ်လို့သူ့ကို လှမ်းပြောတော့ သူလည်း ခပ်သွက်သွက်လေးထုပေးတော့ ကျုပ်လရည်တွေ သူ့ပါးစပ်ထဲ အရှိန်ပြင်းစွာ ပန်းထွက်သွားတော့တယ်။ ကစ်တီလည်း ဝင်လာသမျှ လရည်တွေ မျိုချရင်း လျှာဖြင့်သတ်ရင်း ကျုပ်ကို မော့ကြည့်ပြီး ပြုံးပြတယ်။သဘောကတော့ ကျေနပ်လားဆိုတဲ့သဘော ကျုပ်လည်းပြန်ပြုံးပြလိုက်တယ်။ ကျေနပ်တာများပြောမနေပါနဲ့ ဆိုတာလေ။ ကျူပ်မှာအိမ်မက်မက်သလိုကိုခံစားနေရတယ်။ နိုင်ငံခြားသူတယောက်နဲ့ ခုလိုမျိုး ကြုံရမယ်လို့ အိမ်မက်တောင်မမက်ဖူးဘူး။ ခံစားချက်ကတော့ ဖော်မပြတတ်အောင်ဘဲ။ နှစ်ယောက်စလုံး ခရီးရောက်ကတည်းက တွယ်လိုက်သောင်းကျန်းနေတာ ဗိုက်တွေကလည်းဟာ လူတွေလည်းပြုတ်ပြုတ်ပြုံးမတတ်ဘဲ။
နှစ်ယောက်သားရေမြန်မြန်ချိုးပြီး ညစာတွေစားပြီး ဟိုတယ်ကိုပြန်လာပြီး အမုန်းဆွဲတော့တာဘဲ။ ကစ်တီက နိုင်ငံခြားသူဆိုတော့ အမှုတ်ကောင်းသလိုအပေးလည်းကောင်းတယ်။ ဘယ်လောက်ဘဲချချခံနိုင်ရည်ကလည်းရှိတော့ကျူပ်အကြိုက်ပေါ့။ ကျူပ်လည်းသုံးရက်လုံးလုံး မနားတိုင်းဆွဲလိုက်တာလူလည်း မျော့မျော့ဘဲကျန်တော့တယ်။ ဒါတောင်နေ့ဆိုရင် တမြို့လုံးဆိုင်ကယ်တစီးငှားပြီးပတ်နေတာ။ ညဆိုရင်တညလုံး ချလိုက်မှုတ်လိုက်နားလိုက်နဲ့ နှစ်ယောကိသားပွဲဖြစ်နေတာပေါ့။ သုံးရက်ပြည့်တော့ သူနဲ့ကျူပ် လမ်းခွဲကျတယ်။ နှစ်ယောက်သားလိပ်စာတွေဖလှယိ ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးကျတာပေါ့။ ကျူပိလည်းလုပ်စရာတွေလုပ်ပြီး နောက်တရက်ပြန်လာခဲ့တော့တယ်။ ကျူပ်ရင်ထဲမှာ ဒီနာရီလေးကို တသက်လုံး သတိရနေမှာပါ။ ဇာတ်လမ်းကို ဒီမှာဘဲ အဆုံးသတ်လိုက်ပါရစေ ….. ပြီးပါပြီ။